खुल्यो एक अर्बको नबिल इक्विटी फण्ड, तपाई पनि लगानि गर्ने हैन त ? — Arthatantra.com
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
Arthatantra.com > अन्य > खुल्यो एक अर्बको नबिल इक्विटी फण्ड, तपाई पनि लगानि गर्ने हैन त ?
खुल्यो एक अर्बको नबिल इक्विटी फण्ड, तपाई पनि लगानि गर्ने हैन त ?
काठमाण्डौं । नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकिड। लिमिटेडले एक अर्बको सामुहिक लगानी कोषको ईकाई सर्बसाधारणमा आईतबारदेखि बिक्री थालेको छ । नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत नबिल ईक्विटी फण्डको १० करोड ईकाईमा आबेदन खुलेको हो ।
प्रति ईकाई १० रुपैयाँ मूल्यका १० करोड ईकाई मध्ये १५ प्रतिशत ईकाई कोष प्रबद्र्धकलाई छुट्याई बाँकी ८ करोड ५० लाख ईकाई सर्वसाधारणले किन्न पाउने छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले एक करोड ईकाई अर्थात १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नसक्ने छन् । बढी आबेदन परेको खण्डमा असोज ६ गते नै यसको बिक्री बन्द हुने छ भने ढिलोमा असोज १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
सर्बसाधारणले नबिल बैंकका शाखाहरु र नबिल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकिड. लिमिटेडको कार्यालय नारायणचौरबाट आबेदन पत्र प्राप्त गरी बुझाउनसक्ने छन् ।
आबेदकले ५० हजार रुपैयाँसम्म नगदै र त्यो भन्दा बढी चेकबाट बुझाउनु पर्ने, डिम्याट खाता र बैंक खाता अनिबार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । ईकाई नपरेको पैसा फिर्ता बैंक खातामा सिधै पठाईने उल्लेख भएकाले यस पटक लगानीकर्ताले आबेदन गर्दा लाममा बस्नु परे पनि पैसा फिर्ता पाउन र शेयर प्रमाण पत्र लिन झंझटको सामना गर्नु नपर्ने भएको छ ।
नबिलको यो दोस्रो योजना हो । यसअघि नबिल ब्यालेन्स फण्ड १ जारी गरी अधिकांश रकम शेयर बजारमा परिचालन गरिरहेको छ । यस योजनाको पनि अधिकांश रकम शेयर बजारमै परिचालन हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रकाशितः २०७३ असोज २
२०७३ असोज २ गते ११:१७ मा प्रकाशित
कलाकार सन्तोष पन्तविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी
दशैं तिहारका लागि खुल्यो सुपथ मूल्य पसल !
विदेशीको दवावमा इन्धन उत्खनन् रोकियो !
सहकारीको ऋण तिर्न नसक्दा १४ वर्षदेखि जंगलको बास
फ्रि भिसामा ठग्नेलाई १५ वर्ष कैद, १ लाख साउदी रियल जरिवाना
निर्माण व्यवसायी महासंघमा कार्कीको जीत सुनिश्चित, यस्ता छन् कारण
पाकिस्तानले पहिलोपटक भारतलाई हरायो,जित्यो उपाधि !
डेभलपमेन्ट मिडिया प्रमोसन प्रा. लि.
लाजिम्पाट २, काठमाडौँ, नेपाल
सूचना विभाग दर्ता नम्बर :५४१/०७४-७५
संचालक/सम्पादक : रामेश्वर कार्की
सम्पर्क : ९८५१०८७६११
Copyright 2020 Development Media Promotion Pv. Ltd. All Rights Reserved.